Blockchain chirongwa DFINITY Stiftung anomutsa $ 61M - Blockchain News
A asiri unotiranga sangano kuti anoda kuva zvikuru decentralized Indaneti kushandisa blockchain wakamutsa $61 mamiriyoni mari kubva U.S. asingashumbi guru makasimba Andreessen Horowitz uye ruzhowa Fund Polychain Capital, izvozvo akati neChitatu.
DFINITY Stiftung anoda kuumba chii rinoati ive "Internet kombiyuta,"Pachena rezvebonde kuti anoshumira guru rakapotsa mainframe kombiyuta iri paIndaneti. Raizoita decentralized shanduro dzakawanda paIndaneti michina mabasa akadai Über, Dropbox, uye eBay, maererano mutsara kambani.
Ryan Zurrer, asingashumbi naye pamusoro Polychain Capital, akadana mabikirwo ane "zvikuru chinogombedzera utsanzi" uye akati kambani yake "nokuita kwedu kupfuura-peri guta nekutumirwa kwemauto."
"Pari zvino, tiri kutarisira zvakaoma zvikuru sei kuti vawedzere kuparadzirwa,"Akadaro DFINITY kuti mutungamiri mukuru musayendisiti Dominic Williams. "Tine kudiwa mazana emamiriyoni achida kuitawo basa racho."
New tsvakurudzo bepa S ...
Previous Post:Sei kurambidzwa crypto pakushambadzira musi Facebook kuchabatsira indasitiri
Next Post:Sei kusika Crypto Exchange
Chivabvu 11, 2018 pa 6:28 AM